FAKAFAKA: Kolontsaina miandry vahiny! | NewsMada
Par Taratra sur 13/04/2021
Voalaza ombieny fa manan-karena kolontsaina ny Malagasy. Hatramin’izao anefa, tsy tena mbola hita misongadina ny voka-tsoa azo avy amin’io lazaina fa harena io. Firy amin’ny Malagasy no misitraka ny harena azo avy amin’ny kolontsaina? Marihina mantsy fa tsy voatery ho ireo antsoina hoe “mpanakanto” ihany no tokony hahazo na handray ny tombony azo avy amin’ny haren’ny kolontsaina malagasy fa ny firenena manontolo mihitsy, na tsy ho hita mivaingana aza izany amin’ny lafiny sasany.
Io haren’ny kolontsaina io, ohatra, no tokony hampahafantatra an’i Madagasikara any ivelany. Anisan’izany ny hira, ny dihy, ny sokitra, ny hosodoko, ny fomba amam-panao isan-karazany, sns. Tsy midika ho fiandrasana na fiandrandrana vahiny akory izany fa fampivelarana ilay harena. Tsy tsara sady tsy mitondra voka-tsoa ny kolontsaina (harena) raha mihidy…
Na izany aza, mila fitandremana fatratra ny fomba fisokafana amin’ny hafa tsy hiteraka fiankinan-doha. Fifamenoina ny tokony ho hita raha tiana ny tsy hahatongavana any amin’ny kolontsaina miandry vahiny izay efa manangasanga any amin’ny firenen-kafa. Tsy afa-mihetsika raha tsy misy vahiny manampy na manohana. Na, noho ny tsy fisian’ny vahiny manohana, lasa vakoka avokoa ny kolontsaina rehetra!